Valan-javaboary El Teide | Vaovao momba ny dia
Maria | | Fialan-tsasatra, General, Tenerife
Teide National Park no lehibe indrindra amin'ny nosy Canary. Ny valan-javaboary iray manontolo dia harena ara-jeolojika tsy manam-paharoa, izay manana tombony amin'ny fanakaikezana an'i Eropa kaontinantaly ary mora azo. Volkano, vava volkano, vavona ary lava dia mamorona karazana loko sy endrika mahatalanjona izay tsy mamela ireo mitsidika azy tsy miraharaha.
2 Ahoana no ahazoana?
3 Inona no ho hita?
4 Inona no tokony hatao?
5 Inona no entina
6 Lova manerantany
Ny Teide National Park no lehibe indrindra sy antitra indrindra amin'ireo efatra ao amin'ny nosy Canary ary eo afovoan'i Tenerife. Amin'ny haavony 190 km2, ny tendrombohitra Teide dia tafakatra hatramin'ny 3.718 metatra, izany no toerana avo indrindra ao Espana. Ny tarehimarika raketiny dia misy koa ny valan-javaboary be mpitsidika indrindra any Espana sy Eoropa, mandray mpizahatany telo tapitrisa isan-taona.
Avy amin'ny Puerto de la Cruz, tsipika 348. Avy any Costa Adeje, andalana 342.
Avy any avaratra ny lalambe TF-21 La Orotava-Granadilla na ny lalambe TF-24 La Laguna-El Portillo Avy any atsimo, ny lalambe TF-21 Avy any andrefana, amin'ny lalambe TF-38 Boca Tauce -Chio.
Ny fizahan-tany amin'ny valan-javaboary voajanahary dia fahitana iray. Ny Cañadas del Teide dia mamorona Caldera goavambe eo amin'ny 17 km eo ho eo ny savaivony izay ipetrahan'i Pico del Teide, volkano fahatelo avo indrindra eto an-tany. Ny lanezy avy eo an-tampon'ny havoana miaraka amin'ny lava izay mikorotsaka midina ny tendany dia mamorona fitambarana tokana izay tsy ho reraka mankafy anao.
Ireo mitsidika ny Tendrombohitra Teide amin'ny lohataona dia tsy afaka manadino ny tajinaste mena, izay mety hitombo hatramin'ny 3 metatra ny haavony ary ahitana voninkazo mena sy lalina lalina an'arivony. Harena tsy manam-paharoa iray hafa eto amin'izao tontolo izao ny Teide violet, tandindon'ny zaridaina, izay tsy hita afa-tsy ambonin'ny haavo 2.500 m.
Raha toa ny planeta hafa ny tontolo sy ny zavamaniry eto dia mahaliana ihany koa ny biby. Ohatra, maro ny bibikely monina eto no tsy hita na aiza na aiza. Misy koa ny biby mandady tsy manam-paharoa, toy ny androngo mainty, ny maharitra maharitra na malama. Ireo tia vorona, eto no ahitanao ny kestrel, ny volondavenona ary ny karazana endemika sasany toy ny finch manga. Na dia karazan'olona nampidirin'ny olombelona aza dia ilaina ny manasongadina biby mampinono miavaka: ny mouflon Corsican. Manome fanamby anao izahay hahita azy io satria mazàna dia sarotra tohina izy io manoloana ny fisian'ny olombelona.
Iray amin'ireo traikefa nahafinaritra indrindra miandry anao ao amin'ny Teide National Park ny manandrana ny tariby tariby. Ny tobin'ny tobim-piantsonana dia eo amin'ny 2.356m ny haavony ary ny 3.555m ny foibeny ambony. Ny maharitra eo anelanelan'ny gara dia maharitra 8 minitra ary mampientam-po tokoa ny traikefa. Raha vantany vao vita ny fitsangatsanganana dia ho hitanao ny fomba fijery tsy manam-paharoa amin'ny fomba fijery ahafahanao maka sary tsy hay hadinoina.
Inona no entina
Any amin'ny tendrombohitra avo dia mora ny mampidina ny herinao satria mandreraka ny ezaka ara-batana maharitra rehetra. Noho io antony io dia mety ny mitondra rano na zava-pisotro isotonic sy sakafo misy angovo toa ny voankazo na voanjo. Mampiasà kiraro sahaza an'ireo faritra an-tendrombohitra ary mitandrema fatratra amin'ny ririnina sy amin'ny fahavaratra satria mety hanimba ny mari-pana ambony sy ambany. Na izany na tsy izany dia tsara ny mitafy akanjo mafana sy palitao amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona satria mety ho azo ovaina tokoa ny toetrandro. Ary farany, zava-dehibe ny fitondrana ny findainao ao anaty kitapo.
Tamin'ny taona 2007 dia nambaran'ny UNESCO ho lovan'ny vakoka manerantany fa taloha be kosa dia nambarana ho Valam-pirenena tamin'ny 1954. Tamin'ny 1989 dia nahazo ny diplaoman'i Eropa ho an'ny fiarovana azy amin'ny sokajy avo indrindra. Izy io dia manana ivon-toerana mpitsidika roa, ny iray any El Portillo ary ny iray ao amin'ny Parador Nacional, natokana ho an'ny natiora sy ny fampiasana nentim-paharazana an'ny Las Cañadas.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Valan-javaboary El Teide